E nwee ọdachi n’obodo, Ndịàmà Jehova na-agbatara ụmụnna ha ọsọ enyemaka ozugbo. Ihe a anyị na-eme na-egosi na anyị hụrụ ibe anyị n’anya n’eziokwu. (Jọn 13:34, 35; 1 Jọn 3:17, 18) Olee otú anyị si enyere ụmụnna anyị aka?
Anyị na-atụkọtara ha ego. N’oge ndịozi Jizọs, e nwere mgbe ụnwụ kpara obodo Judia aka ọjọọ. Ndị Kraịst nọ n’Antiọk atụkọta ego, zigara ụmụnna ha nọ na Judia. (Ọrụ Ndịozi 11:27-30) Taakwa, anyị nụ na ihe na-esiri ụmụnna anyị nọ n’obodo ọzọ ike, anyị na-atụkọta ihe n’ọgbakọ anyị dị iche iche, zigara ha.—2 Ndị Kọrịnt 8:13-15.
Anyị na-ewepụta onwe anyị rụọrọ ha ọrụ. Ndị okenye ndị nọ n’obodo ahụ njinji jiri na-agba mbọ mata ebe ụmụnna niile nọ nakwa otú ha mere. A na-ahọpụta ụmụnna ndị ga na-ekesa nri, mmiri ọṅụṅụ, uwe, na ọgwụ ndị e ziteere ụmụnna anyị. Ha na-ahụkwa na ndị nke na-enwekwaghị ụlọ nwere ebe ha ga-ebi. Ọtụtụ ụmụnna anyị ndị nwere aka ọrụ na-eji ego ha gbaa ụgbọ gaa ebe ahụ e nwere ọdachi. Ha ruo, ha esoro na-ekesa onyinye ndị e zitere, nyekwa aka na-arụziri ha ụlọ na Ụlọ Nzukọ Alaeze. Ihe mere ọ naghị esiri anyị ike ịgbatara ụmụnna anyị ọsọ enyemaka ngwa ngwa bụ na anyị dị n’otu. O teekwala anyị mewere ya. Ọ bụ eziokwu na anyị na-enyere ụmụnna anyị aka ma ha nwee ọdachi, anyị na-agbalịkwa nyere ndị na-abụghị ụmụnna anyị aka.—Ndị Galeshia 6:10.
Anyị na-eji Baịbụl akasi ha obi. Onye nwere ọdachi na-achọkarị ka a kasie ya obi. Ya mee ụmụnna anyị, Jehova na-enye ha ike idi ya n’ihi na ọ bụ “Chineke nke nkasi obi niile.” (2 Ndị Kọrịnt 1:3, 4) Anyịnwakwa na-aga echetara ha nkwa Baịbụl kwere na Alaeze Chineke ga-eme ka nsogbu niile ụmụ mmadụ na-enwe kwụsị.—Mkpughe 21:4.
mailto:?body=Olee Otú Ndịàmà Jehova Si Enyere Ụmụnna Ha Aka ma Ha Nwee Ọdachi?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1102012159%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Olee Otú Ndịàmà Jehova Si Enyere Ụmụnna Ha Aka ma Ha Nwee Ọdachi?